DataMan Inotevera mahara kwenguva yakatarwa | IPhone nhau
MuApp Store tinokwanisa kuwana nhamba hombe yezvishandiso zvinotibvumidza kuyera chiyero chedata redu, mwero uyo, zvichienderana nekushandisa kwatinoita, unogona kupedza mavhiki mashoma. Kana isu tichida kudzora mashandisiro atinoita edu e data chiyero zuva nezuva, kuitira kuti kubva kune rimwe zuva kuenda kune rinotevera isu tinopera data, iko kunyorera DataMan Inotevera ichatibatsira mune iri basa.
Pakutarisa tinogona kuona kuti muganho wedata rako uri kuenda sei. Asi kwete chete kuburikidza neiyo iPhone ine yekuzivisa nzvimbo, asi zvakare Isu tinogona zvakare kudzora iyo data yatinoshandisa kuburikidza neApple Watch yedu. Iko kunyorera kunotipa fungidziro yakangwara yekushandisa kwatinoita chiyero, nenzira iyi tichave nani kudzora mwero wedu.
DataMan Inotevera Iine mutengo wenguva dzose muApp Store ye1,99 euros, asi kwenguva pfupi tinogona kurodhaunirodha zvachose mahara. Mukati mekushandisa tinogona kutenga kutenga shanduko yechinhu chinoratidzwa nedata, asi chinoshanda zvizere pasina kushandisa kutenga uku.
1 DataMan Inotevera Zvimiro
2 DataMan Inotevera nhoroondo
DataMan Inotevera Zvimiro
Kuongorora dhata (LTE / 4G / 3G) uye Wi-Fi.
Wongorora zviitiko neStopwatch Widget.
Inotsigira pamwedzi, makumi matatu-mazuva, makumi maviri nemasere, uye zvirongwa zvevhiki.
Otomatiki kutangazve pazuva rekubhadhara.
Makumi mana etsika akangwarira zvikumbaridzo.
Inoshanda nemakambani ese.
Wona kushandiswa kwakapfuura pamutambo wekubhadhara.
Chengetedzo: pasina VPN hapana kupinda mukati.
Kuvanzika: hapana kuita mari ruzivo rwako.
DataMan Inotevera nhoroondo
Kugadziriswa kwekupedzisira: 12-07-2016
enderana neApple Watch
Rated for anopfuura makore makumi mashanu.
Mitauro: ChiSpanish, ChiGerman, ChiChinese chakareruka, Chinyakare Chinese, Chirungu, ChiItaly, ChiJapanese neDutch.
Kubatana: Inoda iOS 9.3 kana kuti gare gare. Inoenderana ne iPhone, iPad uye iPod Kubata.
DataMan - Dhijitari Yekushandisa Widget1,09 €
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » DataMan Inotevera mahara kwenguva yakaganhurirwa
Ini handikwanise kurodhaunura sezvo ndiri pa9.1 (jailbroken) zvinorwadza. Iwe une mazano here ekuti unga kurodha pasi sei?
Kuburikidza neTunes uye iwe unotova nayo yakabatana neakaundi yako.
Zviri nyore kwazvo, tora xCon kubva kuecydia. Inodzivirira maapplication kubva ekuona iyo jailbreak, inoshanda kwandiri.